नर्स बन्ने रहर पूरा भएन - लाइफ स्टाइल - साप्ताहिक
लोकगायिका मञ्जु पौडेलले नेपालमा तीज मनाउन नपाएको पाँच वर्ष भयो। गत वर्ष उनी मुम्बईमा थिइन्। त्यसअघिका तीज उनले जापान र कतारमा मनाइन्। परदेशमा रहँदा पनि उनलाई खासै नरमाइलो भने लाग्दैन। नेपालीहरूको बाक्लो उपस्थितिबीच नाच्न, गाउन र रमाउन पाउँदा बेग्लै आनन्द मिल्छ। मन्जु आफूलाई 'मुडी खालकी छु' भन्छिन्। उनी मुड चल्दा मात्र व्रत बस्छिन्। उनलाई भोकभोकै व्रत बस्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन। 'राम्रो कर्म गर्‍यो भने फल पाइहालिन्छ नि।' हालैको एक साँझ उनले सुनाइन्, 'व्रत बसेर पाइने होइन।'
मञ्जुकोे दैनिकी बिहान ६ बजे प्रारम्भ हुन्छ। ब्युँझिएपछि नित्य कर्म सुरु हुन्छ। फ्रेस भएपछि चिसो पानीमा मह मिसाएर पिउँछिन्। यति गर्दा-गर्दै शारीरिक अभ्यासका लागि जुम्बा क्लब जाने समय भैसक्छ। केही घण्टा क्लबमा बिताएपछि उनी कालिकास्थानस्थित निवास र्फकन्छिन्। नुवाइधुवाइ सकेर खानाका लागि तयार हुन्छिन्। उनी विशुद्ध नेपाली परिकार मन पराउँछिन्। उनको मेनुमा सधैं दाल, भात, तरकारी तथा गुन्दु्रकको अचार हुन्छ। रेस्टुराँ छिर्दा सी फुड, थुक्पा, सुकुटी आदि अर्डर गर्छिन्। 'वेट कति छ ?' भन्ने प्रश्नमा मन्जुले भनिन्, 'नभनौं।' उनले हाँस्दै भनिन्, 'तर्सिनुहुन्छ ।' विवाहसम्बन्धी प्रश्नमा पनि उनी बोल्न चाहिनन्। उमेर कति पुग्यो ? '१५ वर्ष, तर आईसीमा।' उनले ठट्टा गरिन्।
गुल्मी बम्घाकी मञ्जु हरेक वर्ष तीजको अवसर नयाँ गीत सार्वजनिक गर्छिन्। यसपालि उनले छैटौं एल्बम बजारमा ल्याएकी छिन्। कुराकानी सुरु गर्नुअघि मोबाइल फोनमा उनले युट्युब खोलेर आफ्नो नयाँ गीत बजाइन्-
झझल्को आउँछ मलाई
आलुबोडी अनि तरकारी तामाको........
तीन वर्षपछि जन्मथलो गुल्मी जाने तयारीमा लागेकी मन्जु घरपरिवार एवं साथीसंगीहरूसँग भेट हुने आशाले पुलकित थिइन्। गाउँमा भव्य रूपमा तीज मनाइन्थ्यो। राति-राति लालटिन बालेर दौतरीहरूसँग हूल बाँधेर पल्लो गाउँ थुम्का, डँडालीसम्म पुगेको सम्झना उनलाई ताजै छ। नाचगान र रमाइलोका लागि त्यो बेला मञ्जुको हाइहाइ हुन्थ्यो। किनभने उनको परिवार तथा मामाघरको वातावरण नै सांगीतिक थियो। उनकी आमा भगवती पनि गीत गाउँथिन्। त्यसकै प्रभाव मञ्जुमा पनि देखियो। अर्कातिर उनले अध्ययन गर्ने जनबोध उमाविका शिक्षक नारद गौतमले गीत गाउन-नाच्न लगाउँथे। उनमा आत्मबल बढ्दै गयो। धेरैको नजरमा परेकी मन्जुलाई त्यो बेला अघि सरेर कसैले प्रेम प्रस्ताव राख्ने हिम्मत गरेनन्। त्यतिबेला उनको स्वभाव अलि कडा थियो। राखिहाले सजाय दिइहाल्ने, तर यतिबेला भने उनी पूरै फेरिएकी छिन्। अहिले माया गर्न खोज्नेहरूलाई सम्मान दिन्छिन उनी।
मञ्जुले सुरुवातमा तिनाउ एफएम र बुटवल एफएममा कार्यक्रम प्रस्तोताका रूपमा अनुभब बटुलिन्। लोकदोहोरी र महिला विशेष कार्यक्रम चलाउँदा-चलाउँदै उनी गायिका भइन्। राजधानी फर्किएपछि माउन्टेन टेलिभिजन र नेपाल टेलिभिजनमा पनि अनुभव बटुलिन्। मिडियाकर्मीबाट उनको पहिचान बिस्तारै फेरिदै गयो। उनी आफूलाई स्टेज पर्फमर भन्न रुचाउँछिन्। मञ्जु गायनसँगै स्टेज कार्यक्रमहरूमा पनि उत्तिकै जम्न सक्छिन्। नर्स बन्ने उनको सपना त पूरा भएन, तर लोकगायिका बन्न भने सफल भइन्। महोत्सवहरूका क्रममा मुलुकका ४० भन्दा बढी जिल्ला घुमेकी मञ्जु झन्डै एक दर्जन मुलुक पुगिसकेकी छिन्। उनले सुदूरपश्चिमलाई सुन्दर पश्चिम भन्न रुचाइन्। भाषा, संस्कृति, पर्यटन एवं विविधताका हिसाबले उनलाई त्यस सुदूरपश्चिमले आकषिर्त गर्‍यो। विदेशमा जापान र सिंगापुरले उनलाई तान्यो। जापानीहरू मिलनसार, अरूको आदर गर्ने खालका रहेछन्।
मञ्जु कार्यक्रमअनुसार पहिरन लगाउन रुचाउँछिन्। उनी साडीमा आफूलाई सेक्सी महसुस गर्छिन् भने गाउन, वान पिस, कुर्ता, सलवार, पाइन्ट, टिसर्ट लगाउँदा सहज महसुस हुन्छ। उनी औंठी लगाउने र संकलन गर्ने मामिलामा एकदम सौखिन छिन्। दुवै हातका औंलामा औंठी लगाएकी मञ्जुका नङहरू रातो नेल पोलिसले टल्किएका थिए। हरेक पटक स्टेजमा जाँदा उनी मेकअप गर्न बिर्सन्नन्। अरू बेला दुई सातामा एकपटक ब्युटिपार्लर छिर्छिन्। स्टेज प्रोगाम गर्नेहरू बाहिर रूपमा पनि सुन्दर देखिनुलाई अपरिहार्यजस्तै मान्छिन्, उनी। 'पहिलो नजर त बाहिरी आवरणमै जान्छ नि,' मञ्जुले भनिन्- केही वर्ष पहिलेसम्म उनी स्कुटर चढ्थिन्, तर एकपटक दुर्घटनामा परेपछि स्कुटर चढ्न छाडिन्। अहिले ट्याक्सी चढ्छिन्। एक वर्षमा लगभग ८ महिना त उनी काठमाडौंबाहिरै हुन्छिन्। निजी सवारी साधनको त्यति आवश्यकता पनि पर्दैन। सामसुङको ग्यालेक्सी एस-५ र आईफोन-५ सधैं उनको साथमा हुन्छन्। घरमा हँुदा आइप्याड र आइम्याक चलाउँछिन्। मञ्जेले दिनको आधा घण्टा उनले फेसबुक चलाउन, युट्युबमा नयाँ गीतहरू सुन्न तथा इमेल चेक गर्न छुट्टयाएकी छिन्।
मञ्जु घुमघाम गर्न रुचाउँछिन्। विभिन्न परिकार बनाउन पनि उत्तिकै रहर लाग्छ। खासगरी चिकेन चिल्ली, गुन्द्रुक, आलु-परौठा मीठो बनाउने बताउँछिन्। मञ्जु फुर्सदमा घरको सजावट गर्न, आफन्त भेटघाट गर्न, घरमा साथीहरू बोलाएर रमाइलो गर्न रुचाउँछिन्। उनी मुडअनुसार गीत सुन्छिन्। तीजका गीतमा आइरहेको विकृति रोकिनुपर्छ भन्ने उनको आग्रह छ। आफू सधैं गीत-संगीतकै क्षेत्रमा रमाइरहने मञ्जुले बताइन्। 'म यही क्षेत्रमा खुसी छु।' उनी मुस्कुराइन्।
नेताहरू धेरै भए, कामचाहिँ भएन ।